Banyere Anyị - Wenling Huwei Fan Factory
Emi odude ke Taizhou obodo, Zhejiang n'ógbè, Wenling Huwei Fan Factory na ihe karịrị 200 mkpara a na-elekwasị anya na ventilashion ụlọ ọrụ. Huwei awade okike ngwaahịa site na ịba ụba arụmọrụ na ọhụrụ ume ịzọpụta moto, environmentally-friendly ihe na kachasị ikuku flue imewe. Anyị na-enye ndị na-azụ ahịa nnukwu ọrụ, nchekwa nchekwa, ngwaahịa dị mma na ntụkwasị obi n'ụwa niile.
Site R & D, ebu na-emepe emepe, panel ịkụ, ogwu ogbugba, moto rụpụta ka ngwaahịa gbakọta, anyị nyochaa àgwà akara nke ọ bụla nzọụkwụ, iji nọgide na-ahụ ịrịba uru na àgwà, na-eri, oru oma na ọrụ ebe, nke dị ukwuu mmụba anyị keukwu ike na ikike iguzogide ihe egwu.
Main ngwaahịa- fighter Fans, ulo oru Fans, Fans ventilator, axial-eruba Fans, gas kpo oku na igwe oku eletrik emezuola CE, ROHS, PSE, SAA, CCC asambodo. Na ngwaahịa niile na-exported ka Middle East, Europe, Australia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Japan na wdg .. Dị ka a nsọpụrụ Chineke na-eso ụzọ nke magburu onwe ya mma, site na vetikal mwekota nke ulo oru yinye, anyị iwekota na àgwà nke na-agbaso izu okè na bụla akụkụ nke anyị ngwaahịa.
Dị ka a mba na nkà na ụzụ otutu enterprise, Huwei ekwusi na anyị ozi nke melite ndị mmadụ ibi ọnọdụ, ka adabako coexistence na ọdịdị, ka mma a mma ngwaahịa na ọrụ, na-enye onye ọ bụla a dị ọcha, ala na ike ndụ ohere.